“Mr Trump က အစ္စရေးလ်နိုင်ငံရဲ့ နေရာချထားမှုများကို တရားဝင်ဖြစ်စေလိုက်ခြင်း” | ESD | Burmese
“Mr Trump က အစ္စရေးလ်နိုင်ငံရဲ့ နေရာချထားမှုများကို တရားဝင်ဖြစ်စေလိုက်ခြင်း”
December 4, 2019 vikas Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့သတင်းဝေဖန်ချက်အခန်းကဏ္ဍမှာ JNU တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ P.R. Kumaraswamy ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “Mr Trump က အစ္စရေးလ်နိုင်ငံရဲ့ နေရာချထားမှုများကို တရားဝင်ဖြစ်စေလိုက်ခြင်း” အကြောင်း သတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမဲ့အတိုင်း တင်ပြအစီအရင်ခံပါရစေ။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr Mike Pompeo ရဲ့ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြေနယ်နိမိတ်အတွင်း အစ္စရေးလ်နိုင်ငံရဲ့ နေရာချထားရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ရုတ်တရက်နဲ့ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ကြေငြာချက်ဟာ နိုင်ငံတကာသဘောတူလက်ခံမှုနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရုံသာမက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၇ ခု၊ ဇွန်လ စစ်ပွဲအတွင်းကတည်းကတည်ရှိနေတဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးကို ထောက်ခံတဲ့ အမေရိကန်ပေါ်လစီမူဝါဒကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပေါ်လစီမှာ တည်တံ့မှုမရှိဘူးဆိုဒါကို ငြင်းခုံလျှက် Mr Pompeo ဟာ “အနောက်ဖက်ကမ်းခြေဒေသမှာ အစ္စရေးလ်အရပ်သားတွေကို နေရာချထားမှုက နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဒါမဟုတ်ဘဲ၊ အဲဒီနေရာချထားမှုရဲ့အနေအထားနဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသတို့ရဲ့အခြေအနေဟာ အစ္စရေးလ်နဲ့ ပါလက်စတိုင်းတို့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရမဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်တယ်” လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေရာချထားမှုတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လစစ်ပွဲတွေမှာ Sinai ကျွန်းဆွယ်၊ Golan ကုန်းမြင့်၊ Gaza ကမ်းမြှောင်ဒေသနဲ့ Jerusalem မြို့အပါအဝင် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသတွေ အစ္စရေးလ်တို့သိမ်းယူခဲ့တဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်း နေအိမ်တွေ ဆောက်လုပ်ဒါဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေအိမ်ဆောက်လုပ်မှုတွေကို စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီးမကြာမှီမှာဘဲ စတင်ခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတော့ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံဟာ သူတို့ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို Jerusalem မြို့အရှေ့ပိုင်းအထိ တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီဒေသက စစ်ပွဲမတိုင်မှီ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက် ရှိနေခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အစ္စရေးလ်နိုင်ငံဟာ ပထမနေရာချထားမှုအနေနဲ့ Golan ကုန်းမြင့်ဒေသမှာ နေအိမ်တွေဆောက်လုပ်လာခဲ့ပြီး တဖြေးဖြေး သိမ်းယူထားတဲ့ နယ်နိမိတ်တွေထဲ တိုးချဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိကာလမှာ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေအပေါ် တရားဝင်နေရာချထားမှုပေါင်း (၁၃၀) ခန့်နဲ့ တရားမဝင်နောက်ထပ်စခန်းပေါင်း (၁၀၀) ခန့်ရှိနေပြီး၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အစ္စရေးလ်လူမျိုး (၄) သိန်းနီးပါး နေထိုင်လျှက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစ္စရေးလူမျိုး (၂) သိန်းကျော်တို့ဟာ ၁၉၆၇ ခု ဇွန်လက နယ်စပ်တဖက်တချက် Jerusalem မြို့အရှေ့ပိုင်း အိမ်နီးချင်း ဂျူးလူမျိုး ရပ်ကွက် (၁၂) ခုတို့မှာနေထိုင်လျှက်ရှိကြပါတယ်။ ပြည်သူပေါင်း နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ဟာ Golan ကုန်းမြင့်ဒေသအပေါ် နေရာချထားရေးစခန်း (၃၂) ခုတို့မှာ နေထိုင်လျှက်ရှိကြပါတယ်။
အစ္စရေးလ်နိုင်ငံရေးပါတီအများစုတို့ဟာ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်း နေရာချထားမှု တိုးချဲ့ရေးကို ထောက်ခံကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ဦးရေဟာ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံအတွင်းက လင်္ကျာယိမ်းပါတီတွေအတွက် အဓိကထောက်ခံသူတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နေရာချထားမှုဟာ အစ္စရေးလ်-ပါလက်စတိုင်းစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှာ အဓိကပိတ်ဆို့မှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ပါလက်စတိုင်းတို့ရဲ့ မြေနေရာကို သိမ်းယူခြင်းနဲ့ နေရာချထားခံကြရတဲ့ အစ္စရေးလ်လူမျိုးတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ အလုပ်နေရာရရှိရေး အခွင့်အရေးတွေ၊ ကုန်တိုက်တွေအပြင် လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ ပေါင်းကူးလမ်းတွေ တည်ဆောက်ဒါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အစအဦးပိုင်းမှာတော့ နေရာချထားရေးစခန်းတွေကို ပါလက်စတိုင်းလူဦးရေတွေရဲ့ ဗဟိုအချက်အချာနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တဖြေးဖြေး နေရာချထားမှုကို ပါကလက်စတိုင်းတွေရဲ့မြို့တွေနဲ့ ကျေးရွာတွေအနီး ပြုလုပ်လာနေကြဒါဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကာလအတော်အတန်အထိ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဟာ နေရာချထားမှုတွေကို စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Geneva ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာတရားမျှတရေးတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် အဆိုပါနေရာချထားမှုတွေကို တရားမဝင်ဘူးလို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
Trump အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်လစီ ပြောင်းလဲမှုဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Jerusalem မြို့ကို အစ္စရေးလ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့ Golan ကုန်းမြင့်ဒေသအား အစ္စရေးအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် နယ်နိမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် Mr Benjamin Netanyahu အား ထောက်ခံမှုတွေ ကျဆင်းလာဒါတွေကို နောက်ခံထားပြီးပြုလုပ်ခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလနဲ့ စက်တင်ဘာလတွေမှာ Knesset ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ချီကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင် အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဟာ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံမှာ မပေါ်ပေါက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ စွတ်စွဲခံနေသည့်တိုင် ယခုအခါမှာ Mr Netanyahu ဟာ Jordan တောင်ကြားကို တိုးချဲ့ရေးအတွက သက်သက်သာ အစိုးရဖွဲ့စည်းလိုတယ်လို့ ပြင်းခုံလျှက်ရှိနေပါတယ်။
Trump အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာလို့ ရပ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘဲ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးဟာ ပြဋ္ဌနာ်းချက်တခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၆၅) နိုင်ငံတို့ဟာ အဲဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Nauru ၊ Micronesia နဲ့ Marshall Islands နိုင်ငံတွေကသာ အစ္စရေးလ်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ပြီး၊ ရှင်သန်နိုင်တဲ့ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်လာရေးကို ခိုင်မာစွာ ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလို တချိန်တည်းမှာဘဲ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ဆက်ဆံမှုတွေထားရှိနေပါတယ်။ သမ္မတ Mr Trump ရဲ့ နေရာချထားရေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုသစ်ဟာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံပေါ်ပေါက်ရေးကို နောက်ထပ်နှောင့်နှေးစေလိုက်ပြီး၊ တင်းမာမှုတွေ မြင့်မားလာဘို့ အလားအလာတွေရှိနေပါတယ် စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် ပါမောက္ခ P.R. Kumaraswamy ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို နိဂုံးချုပ် အစီအရင်ခံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။